Soo dejisan FrostWire 1.6.4 – Android – Vessoft
FrostWire – software ah inaad kala soo baxdo iyo wadaagaan files ee network BitTorrent ah. FrostWire bixisaa search soonka faylasha iyo ka mid dhisay-in chat in ay la xiriiraan dadka isticmaala. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan files leh qalab kale isticmaalaya xiriir ah wireless ama internetka. FrostWire ka mid ah la dhisay-in ciyaaryahan inuu u ciyaaro audio iyo video files degsan. Software waxuu si loo xakameeyo abuse iyo quful si ay files soo xulay. FrostWire kale oo ku jira maktabada ee files oo loo qaybiyey qaybaha oo kuu ogolaanaya in aad rename, tirtirto ama faylasha wareejiyo codsiyada kale.
Search Easy faylasha
Fast download of file